A ga-emepe Redmi K40 na February 25 na igwefoto atọ | Gam akporosis
Akwụkwọ ọkwa nke Redmi K40 gosipụtara igwefoto ya atọ: a ga-ewepụta ya na February 25
N'oge na-adịghị anya usoro Redmi K ga-enwe onye otu ọhụụ, nke ga-abụ ọkwa nke ya ma, dị ka atụ anya, ga-abata dị ka Redmi K40. Ma ọ bụ na ama a dị nso na mbido ya karịa mgbe ọ bụla, nke a gosipụtara ugbu a site na ọkwa ọkwa ọhụụ nke ụlọ ọrụ ahụ bipụtara.
A ga-eme ngwaọrụ a n'ọchịchị na ihe na-erughị otu izu, ebe ọ bụ na February 25 bụ ụbọchị mbido ndokwa iji hụ ọkụ. N'ụbọchị ahụ anyị ga-amata njirimara niile na nkọwapụta teknụzụ nke otu, yana nkọwa nke ọnụahịa na nnweta.
Akwụkwọ ọkwa nke Redmi K40 pụtara ụbọchị ole na ole tupu ya amalite
Ihe anyị chọpụtara ugbu a site na Redmi K40 bụ nke ahụ sistemụ igwefoto ya dị okpukpu atọ na bụghị quadruple dị ka ụfọdụ media na mbụ na-ekwu site n'ụzọ nke filtration na ntule. N'ebe a, anyị ga-enwe nnukwu ihe mmetụta 64 MP, ọ bụ ezie na a na-ekwu na anyị nwere ike ịnweta 108 MP otu.
Redmi K40 akwụkwọ mmado na igwefoto atọ
Ihe ọzọ ekwuru banyere ọnụ a bụ na ọ ga-enwe usoro mkpanaka Snapdragon 888, ma akụkọ dị iche iche na-ekwu na kwuru SoC ga-adị na Redmi K40 Pro, n'ihi ya, n'oge na-adịghị anya, anyị ga-achọpụta ihe bụ eziokwu na ihe na-abụghị. Ọ bụrụ na ọ bụ ụgha na ọnụ ga-abịa na hotara na mbụ kwuru processor chipset, na Snapdragon 870 ọ ga-abụ ihe kasị viable nhọrọ maka otu.
Njirimara ndị ọzọ na nkọwapụta nke usoro nyocha nke TENAA kwupụtara batrị ikike 4.500 mAh, Igwe AMOLED nwere mkpebi FullHD + na nke dị larịị yana ịgụ akara mkpisiaka na oghere dị na ihuenyo ahụ iji tinye igwefoto selfie, nke nwere ike ịbụ mkpebi 32 MP
A ga - enwe ihe dị iche na aha Redmi K40S, mana anyị ga-ama nke a na February 25, nke bụ ụbọchị mmalite nke ngwaọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Akwụkwọ ọkwa nke Redmi K40 gosipụtara igwefoto ya atọ: a ga-ewepụta ya na February 25
Freddy Krueger si 'A Nightmare na Elm Street' na-abịa Onye nwụrụ anwụ site n'ehihie n'oge adịghị anya
Kedu ihe ọhụụ anyị na-atụ anya site na smartphones na 2021?